Inguqulo 0.4.0 – Happy integrations new
January 1, 2010 by okunikezwayo 25 Amazwana
Le nguqulo entsha inikeza integrations ababili ethandwa kakhulu plugins wordpress. Okokuqala, google-XML-zamasayithi inikeza indlela ukudala amamephu esayithi ukusetshenziswa google and google Webmaster Amathuluzi, ukuhlanganiswa qamba url ngayinye url amamephu esayithi eyengeziwe for the amakhasi elihunyushwe. Lokhu kusebenzelana udinga patch elula ukuba kwenziwa plugin original, funda kanjani FAQ, noma uxhumane nathi ukuthola ifayela nezimagqabhagqabha. Sithemba ukuthi izinguqulo esizayo google-XML-amamephu esayithi izobandakanya lokhu patch ngokuzenzakalelayo.
Ukuhlanganiswa sesibili nge WP-super-isilondolozi esihlinzeka indlela ukulondoloza isikhashana for wordpress, lokhu plugin akukhona eyethile kwenhliziyo inikeza ukulondoloza isikhashana umshini oluqinile exchange for amathani izinkinga on the way, ukufakwa kanzima nokuhlanganiswa kumatima. Nokho, lokhu kuhlanganiswa inikeza lesi msebenzisi plugin ushintsho elula okuyinto susa ikhasi eligcinwe ngesinye isibukezo phezu translation action, lokhu kuvimbela izinguqulo kungenzeki izikhathi eziningi futhi kusukela kubasebenzisi ukubona non-elihunyushwe wokuqukethwe (futhi esimweni-auto translation, ukuhumusha ngokuphindaphindiwe).
Uma une plugins more ufuna ukuhlanganiswa, futhi une imibono kanjani (mhlawumbe ikhodi), nje ukulahla inothi lapha. Futhi yebo – happy new eyishumi kithi sonke!
Update 2010/1/3 – Kubonakala kukhona nephutha imiyalelo patch, imiyalelo ezintsha ishintsha kule site FAQ sigaba (ngiyabonga myatus). The patch kungabuye ngqo kulayishiwe kusuka kule isixhumanisi : sitemap-core-322-nezimagqabhagqabha
Lalihlezi Ngaphansi: Izimemezelo ukukhululwa Umake With: google-XML-zamasayithi, minor, ukukhululwa, plugin wordpress, WP-super-isilondolozi